ဇာဂနာ ဒဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နိုင်ငံ့ အရေး - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | February 3, 2021 | knowledge | No Comments
စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ရင် ကြံ့ဖွံ့ကို တိုက်ခိုက်ရင် အဲဒီလို တိုက်ခိုက်တဲ့ -အစိုးရပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်အမတ်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အနီ လော်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာရေးဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပလက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် NGO လိုလူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဆန့်ကျင် သွားမယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွှန်တော်တို့တတွေဟာ အရပ်သားအစိုးရ ပြည်သူ့အစိုးရ ဆိုပြီးတော့ ၂၀၁၅ တုန်းက မဲပေးတင်လိုက်တာဟာ စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အသံတွေကို ကြားချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ အရပ်သားအစိုးရကြီးက ပြည်သူတွေ အတွက်ဘာတွေများ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲပေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် နဲ့ မဲပေး တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်။
အခုတော့ အရိုးကို အရွက်ဖုံးပြီး Fb တစ်လျှောက်လုံး အရင်အစိုးရ အပြစ်ပြောခြင်းတွေနဲ့သာ ပြည့်နှက် နေတယ်။ ဒါတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ပြည်သူစိတ် ဝင်စားတာက သူ တင်လိုက်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရကြီး ဟာ ပြည်သူ့အတွက် ဘယ်လို ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ဆောင် ပြီးပြီလဲ ? ဒါမှ မဟုတ် သူ တင်လိုက်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရကြီးဟာ
ဘယ်လို ဆိုးကျိုး ဆင်းရဲတွေကို ဖေါ်ဆောင်ပြီးပြီလဲ ? ဒီမိုကရေစီမှာ လူနည်းစုက အစိုးရလူများစုက ပြည်သူ ဖြစ်တယ်။
လူများစု ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့ဘဝ ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ တိုင်းရမှာ။ အဲဒါကို ပြည်သူ စိတ်ဝင်စားတာ။ အရင်အစိုးရတွေဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်းတယ်လို့မဆိုလိုဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူစစ်စစ် ဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရ နဲ့ လက်မဲ့အစိုးရ နှစ်ရပ်မှာ သူနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျသက်ဆိုင်တဲ့ လက်ရှိ အစိုးရရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် အမှားအမှန်ကိုသာ ဝေဖန် ထောက်ပြမှာ ဖြစ်တယ်။
သူရွေးတင်ထားတာကိုး။ ပြည်သူဟာ လက်ရှိ သူသုံးနေတဲ့ အစိုးရ ကောင်းမကောင်း ဝေဖန် စောင့်ကြည့်ခြင်း
သည်ပင်လျှင် ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ ခုလက်တွေ့Covid ကာလကိုဘဲကြည့် ဘာလုပ်ပေးပြီးပြီလဲ?
ကျေနပ်လောက်အောင်ပေါ့ ပြည်သူကို ဆန်ဝေတာကဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်ဝေတဲ့စနစ်လား? Covid-19ကာလမှာပြည်သူ့အတွက် maskတစ်ခုလှူခဲ့ပြီးပြီလား? အဲဒီလို စောင့်ကြည့် ဝေဖန်ပြီးတော့ နောင် ၅ နှစ်တဆက်မှာ ဒီအစိုးရကို ဆက်ရွေးချင်ရွေးမယ်။ မရွေးချင် မရွေးဘူး။ ဒီလို ဖြစ်ရမှာ။ ပြည်သူ့အာဏာ ဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ အဲဒီလို ဖြစ်မလာစေရေး ကိုယ့်ဆီလာမဲ့စီစစ်ချက်တွေကို အာရုံ မရောက်အောင် အရင်အစိုးရတွေရဲ့ အပြစ်တွေနဲ့ဖုံးပြီး အာရုံလှည့်ပေးနေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ရဲ့ ကွာလတီ စစ်စတန်မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို သာ အပြစ်ထိုင်ပြောခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၅ နှစ်မကလို့နောက်ထပ် နှစ်ငါးဆယ် အုပ်ချုပ်လည်းမတိုးတက်နိုင်ဘူး။
Homeschooling – အိမ်တွင်းကျောင်းတို့ ပေါ်ပြီလား
နည်းပညာနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအကန့်အသတ်ရှိပေမယ့်COVID -19 ဓာတ်ခွဲခန်းထဲက နေ့မနားညမအား မြန်မာဆေးပညာရှင်များ